Ukutyhilwa kweMfihlo yeWebhusayithi (WHSR): Uhlalutyo, uthelekiso kunye neengcebiso
UkuHlala kweWebhu ebalulekileyo
Fumana i-Web Host Best
Ukuphononongwa okubambileyo okwakhiwa
uphando oluzimeleyo kunye nedatha enzima.
Iindawo zethu eziBalaseleyo zokuPhatha iiWebhu
Thelekisa & Khetha
UkuHlala okuHlulelekileyo kweWebhu (<$ 5 / mo)
IiNkonzo zeeNgcono zeeMeyili ze-imeyili
I-Website yeHlabathi yeHlabathi
Eyona Ndawo ingasetyenziswayo yeWebhu
Ukusingathwa kwe-WordPress ePhatha kakuhle
Abanikezeli beeNkonzo zokuHlala kwiVPS
Eyona nto ibalulekileyo yokuHamba kwezoShishino
A2 HostingUkubamba ngokuhlanganyela kuqala kwi-$ 3.92 / mo.
BlueHostUkubamba ngokuhlanganyela kuqala kwi-$ 2.95 / mo.
GreenGeeksUkusingathwa kwe-Eco-friendly ukuqala kwi-$ 2.95 / mo.
HostgatorUkubamba kwamafu kuqala kwi $ 4.95 / mo.
HostingerUkubamba ngokuhlanganyela kuqala kwi-$ 0.80 / mo.
HostPapaI-hosting yaseCanada iqala kwi-$ 3.95 / mo.
^ Lonke uvavanyo loMamkeli
InMotion HostingUkubamba ngokuhlanganyela kuqala kwi-$ 3.99 / mo.
InterServerUkwabelana ngokuhlanganyela kwi $ 5 / mo ebomini.
Scala HostingUkusingathwa kwePSL VPS kuqala kwi- $ 13.95 / mo.
SiteGroundUkubamba ngokuhlanganyela kuqala kwi-$ 3.95 / mo.
TMDHostingUkubamba ngokuhlanganyela kuqala kwi-$ 2.95 / mo.
Injini yeWPUkuphathwa kweWP kwi $ 29 / mo.
I-Web Host Basics Indlela yokusingathwa kwewebhu kunye negama lesizinda lisebenza njani.
Bamba iwebhusayithi Iindlela ezimbini zokubamba iwebhusayithi esebenzayo.
Khetha umgcini weWebhu Uluhlu lweendawo ezili-16 zokujonga iindwendwe.
Funda ukuseta i-SSL Thelekisa kwaye uthenge nge-SSL ngexabiso eliphantsi kwi-CA ethembekileyo.
Qala ibhulogi Isikhokelo sokuqala ngesinyathelo sokuqalisa iblogi.
Ukukhulisa iBlog yakho Iindlela ezili-15 zokukhuthaza kunye nokukhulisa ibhlog yakho.
^ Onke amaNqaku
VPS Guide yo kuhlala Njani iVPS? Lilixesha lokutshintsha nini?
Shintsha Umphathi weWebhu Indlela yokuhambisa iiwebhsayithi yakho kumphathi omtsha.
Iindleko zokuHamba kwiWebhu Kufuneka uhlawule kangakanani ukusingathwa kwewebhu?
Yenza iWebhu Iindlela ezintathu ezilula zokwenza iwebhusayithi yakho.
Isebenza njani i-VPN Indlela iVPN isebenza ngayo kwaye uyayifuna enye?
Fumana eyona VPN Ungayikhetha njani kwaye uyithenga phi i-VPN?
I-WHSR Web Host SpyTyhila i-infra kunye neteknoloji emva kwayo nayiphi na iwebhusayithi.
I-WHSR i-Uptime CheckerHlola ngokukhawuleza ukuba i-website ihla.
Ukuqhathaniswa kweMebho yeWebhu Thelekisa kwii-webmasters zewebhu ze-3 kanye.
I-Web Hosting Secret Imbula
Isiseko sokwazisa kunye nolwazi lwetekhnoloji yewebhu kuyo nayiphi na iwebhusayithi.
Ukusingathwa kweWebhusayithi okokuqala?
Isikhokelo sokusingathwa kwethu kunye newebhusayithi ifana nemephu - iluncedo kuphela ukuba uyazi apho uya khona.
Udinga ukuqonda into oyifunayo kwi-host host yewebhu ngaphambi kokuba ukhethe enye.
Ukufumana i-newbies, umgaqo-mshini wobuqili ukuhlala uqala encinci ngesicwangciso esinokuthengwa ngokubambisana. Kubabasebenzisi abaphambili, ukusetyenziswa kwesiza sakho kubalulekile - oku kuthetha ukuba ufuna isisombululo esisisigxina kunye nesisombululo.
Isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo okusingathwa kwewebhusayithi yakho yokuqala
Indlela yokusingathwa kwewebhu kunye negama lesizinda lisebenza njani
Apho ukuthenga igama lakho lokuqala lesizinda
Indlela yokukhetha umniki-nkonzo ofanelekileyo
Indlela yokuhambisa indawo yakho kwi-host host entsha
Indlela yokuthenga nokufaka isitifiketi se-SSL
Eyona nkonzo ephantsi kakhulu yokubamba ngezantsi i-$ 5 / mo
Iinkonzo eziphambili zokubamba ii-imeyile
Ukusingathwa ngokugqithiseleyo kumashishini amancinci / aphakathi
Fumana eyona Ndawo yeWebhusayithi yakho
Ayikwazi ukugqiba ukuba yeyiphi umphathi wewebhu ohamba naye?
Siyabhalisa kunye nokuvavanya iinkonzo zokubamba ngewebhu ukwenzela ukuba unqande ukuxosha kwaye ukhethe izicwangciso ezintle - Bona uluhlu olupheleleyo lweembononongo zethu apha.
Sebenzisa isixhobo sethu sokuqhathanisa ukuthelekisa uluhlu olubanzi lweenkampani zokubamba. Unokuqhathanisa neenkampani ze-3 zokubamba ngokukhawuleza kwaye zibala zonke iinkcukacha ozifunayo ezifana nokulinganisa kwethu, ixabiso, iimpawu ezisisiseko, kunye nokuhlaziywa okukhawulezayo kunye nokuhlaziywa kwengxowa.
Jonga iiPuzzle zethu eziBalaseleyo zeWebhu ezi-10
I-WHSR I-Web Host Comparison Tool
Thelekisa: I-BlueHost vs InMotion Ukusingathwa
Thelekisa: I-BlueHost vs SiteGound
Thelekisa: I-Hostgator vs iSayithiGround
ISifundo seMakethe: Uninzi kangakanani lokuhlawula umphathi wewebhu?
Ixabiso lokusingatha liye latshintsha kakhulu kwi-10 yokugqibela kwiminyaka eyi-15.
Ekuqaleni kwe2000, ipakethe ye-8.95 / mo yeempahla kunye nezixhobo ezisisiseko zacatshangwa zingabizi. Emva koko intengo yehla kwi $ 7.95 / mo, ke i $ 6.95 / mo, i-$ 5.95 / mo, kwaye iphantsi.
Siye safunda iimpawu zentengiso yakutshanje kwaye ndafumanisa ukuba, ngokuqhelekileyo ...
Inqanaba lokungena elihlangeneyo libiza i-$ 3.40 / mo xa ubhalisa & $ 4.94 / mo ngexesha lokuvuselela,
Isicwangciso sokungena kwi-VPS sibiza i-$ 17.20 / mo ekubhaleni & $ 20 / mo ngexesha lokuvuselela, kwaye
Iiplani eziphezulu kakhulu ezabelwana ngazo kwaye iiplani zokubamba i-VPS aziyi kubabiza ngaphezu kwe-$ 25 / mo kunye ne-$ 170.
Ukuba uyazibuza ukuba kufuneka uhlawule kangakanani ukubamba iwebhu ...
Funda iSifundo sethu kwiNkcitho yoHlaziyo lweWebhsayithi
Izaphulelo zeeWebhusayithi kunye neziDweliso
Ikhowudi yekhuphoni yeGreenGeeks
Ikhowudi yekhuphoni: I-10YEarsGREEN Kwabo batyikitya i-GreenGeeks okokuqala, sebenzisa le khowudi yekhuphoni ukugcina ukuya kwi-70% ekusingatheni okwabelwanayo (cofa apha uku-odola). Ukutyhilwa: I-WHSR ifumana imali yokudluliselwa ...
Ikhowudi yekhuphoni ye-Interserver
Ikhowudi yekhuphoni: WHSRPENNY Unomdla kwi-Interserver ekwabelwana ngayo ngokubamba? Ungabazama ngoku nge $ 0.01 kuphela ngenyanga ngekhowudi yepromo "WHSRPENNY" (cofa apha uku-odola). Ukutyhilwa: WHSR…
Iikhowudi zeKhuphoni yeGlowHost
Ikhowudi yekhuphoni: I-WHSR30 Kwabo benza ukuthenga kwabo okokuqala eGlowHost, sebenzisa le khowudi yesaphulelo yokufumana i-30% isuswe kwizicwangciso zokubamba zewebhu zeGlowHost (cofa apha uku-odola). Ukutyhilwa: WHSR ifumana…
Ngakumbi kwi-Website Hosting
Ngaba ukuhanjiswa kwamafu okwenyani kufana neDijithali yolwandle yedijithali? Ukuntywila ngaphakathi kwixabiso lamafu
I-Cloud Computing iye yarhweba ngakumbi kuphela kwiminyaka elishumi edlulileyo. Ngokobuchwepheshe, lo mbono sele ukho ixesha elide. Igama '' ilifu 'ikakhulu likwindawo yokubonisa…
Iindlela ezili-10 zeChephe ezinye iindlela zokuSingathwa kweSayithi
I-SiteGound inesidima esibonakalayo ekusingatheni iwebhu kodwa amaxabiso okuhamba kwexabiso akhuthaze abanye ukuba bajonge kwezinye iindlela ezingabizi kakhulu. Izicwangciso ngoku ziqala ngokusondeleyo kubini ngokwexabiso, abasebenzisi banokuthi c…
Ungayibamba Phi Iprojekthi yakho elandelayo? Iinkonzo eziphambili zokubamba i-Django
I-Django yinto encinci ngenxa ye-niche njengoko injalo, uthando lwale nkqubo lubonakala ngathi luqhekekile phakathi kweembangi ezimbini ezinomdla- i-United States neRussia. Okwangoku, kuninzi okunokufunwa nge-dev ...
I-7 iindlela zeGoDaddy zeDomokhaya nezeNdawo
IGoDaddy inokuba 'ngutata omkhulu' weenkonzo zokubamba kodwa eyona inkulu ayisiyonto ibhetele. Yasekwa ngo-1997 njengeJomax Technologies, le behemoth ye-Arizona-intloko namhlanje isebenza ngaphezulu kwe-18 yezigidi…
Ababoneleli ababonelela ngokuBamba ngamafu ngo-2020
Aboneleli ababonelela nge "Cloud" yokubamba namhlanje banikezela abasebenzisi ngaphezulu kwengqokelela yezixhobo. Bahlala behlulahlula kwimarike esele igcwele. Ngeenkonzo zewebhu becomin…
Ababoneleli abaBalaseleyo be-VPS yokuGcina (i-2020)
Izicwangciso zokusingathwa kweVPS ziindawo zamandla uninzi lwabanikezeli beenkonzo zokusingathwa kwewebhu kuluhlu lwesisombululo. Zikwayindawo emnandi yotshintsho kubasebenzisi abaninzi kwaye enyanisweni, kulapho uninzi lwabo luthe lwaphela bakuba lukhule…
I-Plesk vs cPanel: Thelekisa iPhaneli yokuLawulwa kweWebhu yeHlabathi eyaziwa kakhulu ngeLizwe
Iiphaneli zokulawula ziyinxalenye ebalulekileyo yamava wethu wokubamba iwebhusayithi kwaye uninzi lwethu alubaniki ingcinga ezininzi. Umzekelo, Ngaba ubusazi ukuba ezona zakhiwo ziPhambili zoLawulo lweWebhu zaziwa kakhulu…
Ezona ndawo ziBamba zaSimahla zeWebhu (2020)
* Uhlaziyo: Uluhlu lwamaxabiso kunye netheyibhuli yokuthelekisa ihlaziyiwe. Sonke siyazithanda ii-freebies kwaye ayifanele imangalisi ukuba nakwi-web host kukho iitoni zefreebies ukuba uyazi apho ujonge khona. Hayi ...
I-Case Curious ye-Absolutely Free Domain Name
Ngaphezulu kwegama le-domain ye-348 yezigidi ze-domain ezibhaliswe njenge-2018, amagama e-domain atshisa izinto zokuthengisa. Enyanisweni, kukho imfuneko enkulu ukuba iNkampani ye-Intanethi yeeMagama abelwe ...
Ukwakha i-Blog ephumelelayo
Uyakha njani ibhlog yakho yokuqala usebenzisa i-WordPress? Ungayenza njani imali yokubhloga? Ungayikhulisa njani inkuthazo yebhlog yakho? Zeziphi izixhobo ezifanelekileyo zokubloga oza kuzisebenzisa?
Funda yonke into-ukusuka kwisiseko ukuya kwi-tatics zentengiso yebhlogi eziphezulu ezivela kubalogi "abaye babekhona kwaye benza oko".
Ungayiqala njani iBhlog ka-2020
Iingcebiso ze-WHSR zebhlogi
Indlela yokufumana Iibhulogi ze-8,000 Iingxelo: Isifundo seNkundla
Kungekudala ndamkela ingxelo yam 8,000th kwiBlogging From Paradise. Emva kokubetha eli libalaseleyo ndifuna ukwabelana ngolu hlobo lwesifundo ngokuchaza indlela yokufumana izimvo ze-8,000 kwiblogi yakho nayo. Kutheni ufuna ukuqala ...
Iibongo zegama lebhulogi: Iingcebiso zokukhetha igama elipheleleyo kwiBlog yakho
Yiyiphi into ebalulekileyo ebhekene nazo zonke iiblogi ezinobunzima? Ukuzama ukukhetha igama leblogi yabo. Ukubiza ngeblogi kunokuba nzima kakhulu, ngakumbi ukuba untsha kulo lonke ibhulogi kunye nento yokwenza uphawu. ...
Izenzo zokuBloga ezingcono kwiBlogs ezingenzi nzuzo
Ibhulogi ingaphezu kwendlela yokuthumela izibalo kunye nokushicilela ukukhishwa malunga nenkampani yakho. Enyanisweni, isetyenziswe kakuhle, ukubhulobala ukungenzi nzuzo kungaba yinto efunekayo yokuqinisa inkampani yakho ...
Ukuqhuba iVenture ye-Intanethi
Yonke ishishini lifuna into ethe ngqo kwi-Intanethi- Ufuna indawo ekwi-Intanethi ukwakha ishishini lakho, ukuthengisa iimveliso okanye ukufumana igama lakho apho.
Akumele ube yinto ye-tech geek okanye umprofeti.
Landela indlela efanelekileyo. Khetha iipulatifomu ezifanelekileyo. Sebenzisa izixhobo zokushicilela. Uya kuba ngu-100% kakuhle.
Iindlela ezintathu zokwenza iwebhusayithi / Iingcamango ezingama-50 zoShishino kwi-Intanethi
Isikhokelo seWebhu esitsha kunye nesikhokelo soPhuculo
Ukuxoxa ngokuthetha kunye nezinye ezili-10 iiWebhusayithi ze-Django
I-Chaturbate yindawo ethandwa kakhulu, kodwa ngaba ukhe uzibuze ukuba zeziphi iiteknoloji eziqhuba? Emva kwayo yonke loo nto, iyakwazi ukuphatha amawaka abantu abaphilayo ngokufanayo kubaphulaphuli abaninzi nakuphi na…
Ukonyusa isantya seWebhusayithi nge-Cloudflare (Isikhokelo sokuseta esilula)
Yintoni iCloudflare? I-Cloudflare yaziwa kakhulu ngokuba yiNethiwekhi yokuZiswa kweMxholo (CDN). Oku kunceda iwebhusayithi ukuba yehlise isantya sephepha lewebhu. Indlela ephambili yokwenza oku kukwenza i-caching. Nangona kunjalo, Cl…
I-CyberGhost Pros: Into endiyithandayo ngeCyberGhost 1. I-Romania ngaphandle kwe-14-Eyes Jurisdiction Jurisdiction yenye yezinto ezibaluleke kakhulu kumboneleli weenkonzo we-VPN. Ngokwesiqhelo, siyazikhathalela…
Izixhobo ezi-7 zoXinzelelo lokuvavanya iwebhusayithi yakho yeZithuthi eziNzima
Kwaneyona novice iphakathi kwabanini bewebhusayithi iye ngaxa lithile okanye yavavanya intsebenzo yewebhusayithi. Nangona kunjalo, uninzi lwezi mvavanyo zihlala zigxile ekulayisheni isantya okanye ama-indices amava omsebenzisi. Kodwa ntoni…
Indlela eyaziwa ngayo i-HHH isasaza iinkonzo zomgangatho wamashishini kuMthengi ophakathi
I-KHHost yasungulwa kwi-2006 kwaye ngelo xesha yayijolise kakhulu kwi-Virtual Private Server (VPS) kunye neseva yendawo yeseva. Yayikuminyaka emibini kuphela edlulileyo ukuba umphathi weKnowHost uJustin Sau…
Ukugcina iliso kwindawo ethembekileyo ethembekileyo kunye nokutsha
Ukutsha, umphuhlisi weNewsworks, sisixhobo esilula kakhulu sokujonga iwebhusayithi esiqala ngexabiso elimnandi- mahala. Kwindawo encinci kakhulu, ikuvumela ukuba ujonge ngokuzenzekelayo iseti ye-webs…
Ukukhusela ubumfihlo bakho kwi-Intanethi
Kule Age yoLwazi yanamhlanje, idatha yimali entsha. Idatha yakho yobuqu iyeyenye yezona zinto zibaluleke kakhulu ezifumanekayo kwi-Intanethi namhlanje kwaye njengayo nayiphi na into, inokubiwa kwaye ithengiswe okanye itshintshwe.
Iinkampani zizama ukuqokelela idatha ngakumbi kubasebenzisi bayo ukuya kuthi ga ngoku ukuba ibandakanyeke kakhulu ngelixa amazwe ahluleke ngendlela yokulawula imeko.
Ke, yintoni esinokuyenza njengomntu ngamnye ukukhusela ubumfihlo bethu kwi-Intanethi? Impendulo isikhokelela kwiiVPNs.
Isebenza njani i-VPN / Iinkonzo eziPhezulu ezili-10 zeVPN ekufuneka ziqwalaselwe
Isikhokelo sabucala se-Intanethi
Yonke into odinga ukuyazi malunga ne-Cloudflare (kunye nezinye ongazi)
I-Cloudflare yaziwa kakhulu njengeNethiwekhi yokuZiswa kweMxholo (CDN). Namhlanje kukudala kudlulileyo kwaye ibonelela ngoluhlu lweenkonzo ezigubungela kakhulu uthungelwano kunye nokhuseleko. Injongo yabo echaziweyo: ukunceda…
Isantya seNordLynx seNordVPN ngesantya esikhulu
I-NordLynx yiprotocol yi-NordVPN eyakhelweyo ngokuzinzileyo kwi-WireGuard. Le yokugqibela ithengisiwe ngabavavanyi bokuqala abaninzi ukuba babe zizukulwana ezilandelayo kwiprotocol yonxibelelwano. Nangona kunjalo, ukusukela i-WireGuard i…
Lumka: Ayizizo zonke i-VPN ezisebenza e-China ezifanayo
Sele kudlule amashumi amane eminyaka iChina ivula uqoqosho lwayo. Ngeli xesha lelo xesha, isizwe siye sasaza amaphiko ayo kuyo yonke into ukusuka ekufumaneni ioyile kubuchwepheshe. Kwangelo xesha,…
I-ExpressVPN vs NordVPN: Yeyiphi i-VPN ekuthengeni okungcono?
Kwihlabathi Networks zabucala Virtual, kukho amagama amaninzi abadumileyo. Akukho namnye owaziwayo ngakumbi, kune-NordVPN kunye ne-ExpressVPN. Ezi ziqwenga zimbini ziinkosi kulo mkhakha kangangeminyaka. Yenzelwe abo…
Ngaba iVPN isemthethweni? Amazwe ali-10 aQinela ukusetyenziswa kweVPN
Inokuza njengemangalisa kwabanye, kodwa i-Virtual Network Networks (VPN) zithintelwe kwamanye amazwe. Nangona uludwe lwamazwe oluvala ngqo ukusetyenziswa kwe-VPN mfutshane, zikhona ...
Ukuchazwa kweModi ye-Incognito: Ngaba kukwenze ungaziwa?
Imode ye-Incognito sisetto othintela imbali yakho yokukhangela ukuba igcinwe. Ngelixa abasebenzisi abaninzi badibanisa indlela ye-incognito kuphela kunye nokukhangela ngasese kwiGoogle Chrome, kokukhona kuya kuthi ga ...
Abantu Babuya I-WHSR
I-WHSR ipapasha amanqaku kwaye ivelisa izixhobo zabasebenzisi abancedisa ekubanjeni nasekukwakha iwebhusayithi.
Imakethi yokubamba ixhamle kunye neenkulungwane zabanikezeli, ngamnye ngeendlela ezahlukeneyo. Injongo yethu kukucima izikrini zomsi kwaye zifike kumgangatho wobungakanani kwaye zixabise ezi nkampani zinikela.
Funda kabanzi malunga ne-WHSR
I-WebHostingSecretRevealed (WHSR) ipapasha amanqaku kwaye iphuhlisa izixhobo zabasebenzisi ezinceda ekubambeni nasekwakheni iwebhusayithi.
malunga . uluhlu lwamagama . guqula . isikhanyeli
Indawo esebenza yi
I-2 Jalan SCI 6/3 I-Sunway City Ipoh
I-31150 Perak iMalaysia
Iindawo zethu: Umamkeli weSayithi . YakhaLoluhlobo
Izixhobo zeWebhusayithi kunye neengcebiso
Abakhi boBuchule beWebhusayithi beShishini elincinane
Ungayibamba njani indawo yeWebhusayithi: Isikhokelo soQalo saGqibeleleyo
I-Plesk vs cPanel: Thelekisa iphaneli yokulawula ukubamba
Iinyaniso Ngokusingatha Imimandla Engenamkhawulo
Umakhi wewebhusayithi: Wix / Weebly
Umakhi weVenkile: BigCommerce / Shopify
Ngaba iVPN isemthethweni? Amazwe Aphelisa Ukusetyenziswa kwe-VPN
Uyiseta njani i-VPN: Isikhokelo sokuhamba
Ungayifihla njani okanye uyitshintshe njani idilesi yakho ye-IP?
Uhlolo lweVPN: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / TorGuard
Amanqaku adumileyo (2020)
Ufuna malini Ububanzi bebhendi?
Indlela yokufikelela kwiWebhu yeWebhu usebenzisa i-TOR Browser
Indlela Yokuqala Nokuqalisa IWebhusayithi YeeForam
Uyihambisa njani iwebhusayithi yakho kwenye iWebhusayithi
Uluhlu Olukhulu Lweengcinga Zoshishino Kwi-Intanethi Ukuze Uqalise